2018 manerana an’i Afrika atsimon’i Sahara: Ireo tantaran’ny fiovana sy ny fanovana nankafizinay indrindra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2019 17:00 GMT
Nahitana fanovana sy fiovàna mahery vaika ny taona 2018 manerana an'i Afrika atsimon'i Sahara. Ny eo amin'ny sary dia mivaky hoe “Ipo Nafasi,” izay midika hoe “Misy efitrano” amin'ny teny Swahili. Misy toerana ho an'ny fanovana sy fiovana bebe kokoa ve amin'ny taona 2019? Saripikan'i Pernille Bærendtsen, nahazoana alalana.
Taonan'ny fanovana sy fiovàna goavana manerana an'i Afrika atsimon'i Sahara ny taona 2018.
Hatramin'ny mpitarika naharitra ela nametra-pialàna noho ny fijoroan'ny olom-pirenena, miseho ny fanantenana feno fahamalinana sy ny tolona mitohy. Matetika ahitana hatsikana, fahasoavana sy hatsara-panahy ireo fotoana ireo satria miloa-bava amin'ny alalan'ny media sosialy sy eny an-dalambe ny olom-pirenena manerana ny kaontinanta.
Nangataka tamin'ny ekipanay ato amin'ny Global Voices Afrika atsimon'i Sahara izahay mba hilaza aminay ny tantara tena ankafizin'izy ireo indrindra hotantaraina momba io taona io. Manomboka amin'ny lahatsoratra niaraha-natao hatramin'ny fandinihana manokana momba ny mari-panondroana sy ny kolontsaina, nametraka fanontaniana sarotra izay niteraka fifanakalozan-kevitra sy adihevitra momba ny mari-panondroana, ny haifitarihana, ny fahefana, ny lohahevitra momba ny vehivavy, ary ny zon'olombelona ny taona 2018.
Mari-panondroana, haifitarihana ary fahefana
Mametra-pialàna ireo mpitarika, misandratra ny fanantenana ombam-pahamalinana ao amin'ny kaontinanta Afrikana
Rehefa lasa ny mpitarika iray dia mitombo ny fanantenana ao amin'ny kaontinanta Afrikana
Taorian'ny volana maromaro nanaovana fanerena tamin'ny fitondrana tao Afrika Atsimo sy i Ethiopia, dia nametra-pialàna ny filoham-panjakana Jacob Zuma sy Hailemariam Desalegn. Niteraka fanantenana mankany amin'ny fanovana demaokratika ao amin'ny firenena Afrikana maro misy mpitondra mpanao ampihimambam-pahefana ny fianjeran'i Zuma sy Desalegn tafala tamin'ny fahasoavana, na dia toe-javatra tsy mitovy aza no nahatonga izany.
Mampiseho fandaharana ara-politika mangeja kokoa ny fomba fijerin'i Tanazania ny fahapelahana
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 29 Oktobra, niantso ireo olom-pirenena mba hanome ny anaran'ireo pelaka i Paul Makonda, mpiandraikitra ny faritra ao Dar es Salaam. Nilaza i Makonda fa “hanadihady ny media sosialy” izy sy ny ekipany mba “hikarohana ireo olona pelaka sy ireo izay miaro azy”, ary nampitandrina ihany koa izy ny amin'ny fijerena sary vetaveta. Niteraka tahotra teo amin'ny fiarahamonina LGBTQ ao Tanzania izany. Tsy niombon-kevitra tampoka tamin'ny fanentanan'i Makonda ny governemanta Tanzaniana, ka namoaka fanambarana ofisialy manazava ny fahavononany hanaja ny zon'olombelona.
Nahoana ny governemanta no manameloka ny fahalalana miteny? Satria matahotra ry zareo sao votsotra ny fahefany
Miha-mitombo ny tontolon'ny fahalalaham-pitenenana antserasera sy ny fanivaham-peo eto Afrika, saingy mihamihena sy mihamafy hidy hatrany hatrany (avy eo). Eo amin'ny sehatra ara-pitsarana sy ara-toekarena, mitombo haingana manerana ny kaontinanta ny saran'ny fanehoan-kevitra. Na dia heverina ho demaokratika aza ny ankamaroan'ny governemanta, dia maro ireo mampihatra ny rafitra manakaiky ny didy jadona – ary hita ho mampiseho fanarahamaso ny sehatra nomerika isaky ny andro mandalo.
Manana olana amin'ny fisandohana olona ny Twitter Nizeriana ary tsy mahavita mandray fepetra ny sehatra
Olana hatrany ao amin'ny Twitter Nizeriana ny fisandohana anarana noho ireo kaonty sasany mampiasa ny anaran'ireo mpanao politika mba hampiroborobo fampielezan-kevitra raha maka ny anaran'ireo olo-malaza mba ampiasaina hanaovana sehatra hosoka ara-barotra kosa ny hafa. Matetika kely dia kely ny fahasamihafana ka somary sarotra ny mahafantatra ireo mpiserasera mitondra ny tena anarany sy ny mpisandoka.
Inona ny maha-afrikana an'i Afrika Avaratra?
Raha ilay Ejipsiana Mohammed Salah no voafidy ho mpilalao baolina kitra Afrikana mendrika indrindra ny taona 2017, dia tezitra mafy ny tao amin'ny aterineto. Nahoana? Tsy nihevitra ny sasany tamin'ireo Afrikana fa tena Afrikanina i Salah ka nahazo ny loka. Tsy vao voalohany izany – ary angamba tsy ho farany – satria nampisalasala koa ny maha-Afrika an'i Afrikana Avaratra. Nahoana ny Afrikana avy any avaratr'i Sahara indraindray no tsy heverina ho tena “Afrikana”?
Manery an'i Frantsa tsy maintsy hiresaka momba an'i Afrika ve ny vazivazin'ny Mondialy?
Raha vao nahita ny sary-sy-soratra ao amin'ny fahana Twitter aho, dia nihomehy. Tsy i Frantsa ihany no nahazo ny amboaran'ny Mondialy 2018, fa nizara ny hafaliany ihany koa ny ankamaroan'ny kaontinanta Afrikana ary nametraka ity fisongadinana ara-panatanjahantena mahatalanjona ity ho misy azy ireo ihany koa. Amin'ny maha-olom-pirenena eto Madagasikara sy Frantsa ahy, izany no fotoana “nahazoako mofomamy sy hihinana azy koa”.
Zon'ny vehivavy sy ny tanora
Mpihira Sodaney Tatsimo, Nyaruach milaza hoe “lehilahy mahasosotra tsy manana drafitra” tamin'ny fanentanana fiarovana ny vehivavy
Nantsoin'ilay mpihira Sodaney Tatsimo Nyaruach ho “lehilahy mankaleo tsy manana drafitra” ao amin'ny hira “Gatluak” ilay sakaiza tsy tena misy (fa noforonina) , niparitaka be ilay hira hatramin'ny namoahana azy tamin'ny volana jona 2018. Miaraka amin'ny hafatra mahery vaika miaro vehivavy, mitaky ny fahamendrehan'ny vehivavy rehefa avy main'ny fitiavana ilay hiran'i Nyaruach. Misarika ny saina mikasika ny herisetra ara-nofo mihatra amin'ny vehivavy avy any Sodana Atsimo ihany koa ny hira.
Iza no tompon'andraikitra amin'ny fampitsaharana ny herisetra ara-nofo ao Somalila?
Tamin'ny oktobra 2017, voatifitra teo amin'ny “faritry ny maoja” i Faiza Mohamed Abdi, 16 taona noho ny fandavany ny fangatahana firaisana ara-nofo nataon'ny mpanafika azy tao amin'ny tanàna seranan-tsambo ao Bosaso, Somalia. Mampalahelo fa tsy irery i Faiza. Fiican, renim-pianakaviana iray tsy manam-bady, 45 taona ary mponina ao amin'ny tobin'ny mpifindramonina ao anatin'ny firenena ao Buulo Ba'alay ihany koa no voaolana teo imason'ny zanany.
Mametraka tantara ao Mozambika ireo ekipam-behivavy manontolo miasa amin'ny fiaramanidina
Andro manan-tantara ho an'ny Mozambikana maro ny 14 Desambra 2018: voalohany teo amin'ny tantaran'ny fiaramanidina sivily ao amin'ny firenena no nisy vehivavy nitondra fiaramanidina. Ny ekipa tamin'ny sidina TM112/3, izay niala ny renivohitra Maputo nankany Manica – halavirana 444 maily – dia ny kapiteny Admira António, mpiara-mpanamory Elsa Balate, lehiben'ny kabinina (efitra misy ireo mpanamory) Maria da Luz Aurélio, ary mpandray mpandeha (hôtesy) Débora Madeleine.
“Fampianarana tsy andoavam-bola amin'ny fisoratana anarana ho an'ny rehetra eny amin'ny oniversitem-panjakana ao Liberia” hoy ny filoha George Weah
Nanohitra ny fampiakarana ny saram-pisoratana anarana izay nolazain'izy ireo tsotra izao fa tsy takany ireo mpianatra Liberiana ao amin'ny Oniversiten'i Liberia, izay nitarika ny fihenan'ny mpianatra nisoratra anarana tamin'ity taona ity ka teo amin'ny 11 000 eo monja ireo mpianatra voasoratra anarana amin'ny mpianatra 20.000. Manoloana ireo teritery tsy mitsaha-mitombo, dia nanambara tampoka ny filoha George Weah fa maimaim-poana ny saram-pisoratana anarana eny amin'ny oniveriste nandritra ny fitsidihany toeram-pianarana lehibe tamin'ny faran'ny volana Oktobra 2018.
‘Vao avy novonoinao aho': sary-sy-soratra amin'ny aterineto mihaika ny governemantan'i Angola
Fantaro ny “Vao novonoinao aho”, fanamby sary-sy-soratra mampihomehy malaza ao Angola izay hizaran'ireo tanora sary milaza fa maty noho ny zavatra samihafa izy ireo: kitapo simenitra, vata fampangatsiahana, fahandroana sakafo, na trano kely – ary matetika miaraka amin'ny fanondroana ireo olana ara-tsosialy atrehana any Angola izany.
Niara-nanoratra: Faaris Adam, Abdoulaye Bah, Lova Rakotomalala, Rosebell Kagumire, Ellery Biddle, Rosemary Ajayi, Pernille Bærendtsen, Prudence Nyamishana, Endalk, Rawan Gharib, Dércio Tsandzana, Liam Anderson, Georgia Popplewell, Taisa Sganzerla